Kubuntu သည်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်စပွန်ဆာကိုပြောင်းလဲပါသလား။ ¬_¬ | Linux မှ
Kubuntu သည်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်စပွန်ဆာကိုပြောင်းလဲပါသလား။ ¬_¬
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
ဒီသတင်းဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ့တင်ထပ်နေတယ်၊ ahora Kubuntu "စပွန်ဆာ" ကိုပြောင်းပါ, ကမရှိတော့ '' ကမကထ '' လိမ့်မည် Canonical မှ ဒါပေမယ့် အပြာရောင်စနစ်များ.
ငါဘယ်လောက်စဉ်းစား ... မေးတယ် Canonical မှ ၏စပွန်ဆာအဖြစ် Kubuntu? ... ကောင်းပြီ၊ အနည်းဆုံးတော့ Canonical ပိုင်ရှင်လို့ကျွန်တော်အမြဲထင်ခဲ့တယ် Kubuntu, ဒါကငါ့ကိုနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကို ဦး ဆောင်လမ်းပြ:
Canonical ရိုးရှင်းစွာဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ ဖယ် Kubuntuကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်သက်သာရာရစေသည်။ ဤ distro သည် Canonical ၏စိတ်အလိုမကျရောက်နိုင်သောကြောင့်ယခုမည်သူကမှပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမည်သူမျှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိချေ။ ... အသိုင်းအဝိုင်းမှာတစ်ခုတည်းသောစကားလုံးရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့ငါသေချာမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
အပြာရောင်စနစ်များ ... တကယ်ကစပွန်ဆာလား၊ ပိုင်ရှင်လား။ ¬_¬
သူတို့ကယခင်ကနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားစီမံကိန်းများကိုကမကထခဲ့ကြသည် KDE, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် နေခြည် နှင့် (WTF !!) Linux ကို Mint, KDE.
Kubuntuနောက်တဖန် (ရှည်လျားသောကာလ၌) နောက်တဖန် (အနည်းဆုံးငါ့အဘို့) နောက်တဖန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်, ငါယခုသူကအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထင်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှို့ဝှက်ချက်သည်မဟုတ်, သူဌေးအသစ်အတိအကျသူလိုချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်, မိမိ ဦး စားပေးချမှတ်လိမ့်မယ် ငါ့ကိုရန် အပြာရောင်စနစ်များ အခြားပိုင်ရှင်မဟုတ်ပါကကမကထပြုသူဖြစ်ရမည်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၁ နှစ်အတွင်းမှာငါတို့စုဆောင်းထားတာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒါကငါတို့ s ကြဲတဲ့အတိုင်းအတာကိုပေးလိမ့်မယ်
ဤသည်ယခုအချိန်တွင်များအတွက်ယောက်ျားတွေအနေဖြင့်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်ပါတယ် အပြာရောင်စနစ် သူတို့ကစီမံကိန်းအတွက်ငွေလှူဒါန်းမည် (ဆာဗာများငွေပေးချေမှု၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးစသဖြင့်) အပြင်စကားပြောလိုသူများလည်းရှိသည်။ Canonical မှ အပေါ် Kubuntu ကောင်းပြီ ... မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် Kubuntu မဆိုင်ဘူး Canonical မှ (ဆိုလိုသည်မှာ distro), ယုတ္တိအရာသည်နာမသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည် (Kubuntu) ကပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ် Canonical မှ မဟုတ်ဘူးလား ဤရွေ့ကားဒေတာများ၏ယောက်ျားလေးများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည် H- အွန်လိုင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Kubuntu သည်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်စပွန်ဆာကိုပြောင်းလဲပါသလား။ ¬_¬
28 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အလွယ်ဆုံးအရာကနာမည်ပြောင်းဖို့ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Kubuntu က "မရှိတဲ့" ubuntu "မှလာခြင်းဖြစ်သည် K သူက ubuntu ကိုဆက်ပြောနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါထင်တာကအနာဂတ်ပြproblemsနာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ ubuntu ရပ်စဲခြင်းနှင့်အခြားအရာတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်။
စပွန်ဆာသို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်ကိုအပြာရောင်စနစ်ဟုခေါ်သည် Klue စနစ်
သို့မဟုတ်၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်သူတို့ခေါ်ကြသည် debian ကပိုင်ဆိုင်အဖြစ် Kebian ငါမသိဘူး ..
သူတို့ကနာမည်ကိုထည့်လိုက်ပေမယ့်အဆုံးသတ် ubuntu နဲ့မဆိုင်ပါဘူး
Kebian ahahahahaha xD ငါ့ကိုဒီအဖြစ်အပျက်ကငါ့ကိုများစွာ xD ရယ်ရတယ်
ဒါမှမဟုတ် "Klue OS" ဖြစ်နိုင်တယ်။
စိတ်ကူးကိုငါ _ _ ^ ^ ကြိုက်တယ်
ဒါဆိုရင်သူတို့ဟာ kubuntu ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရရှိရင် netrunner ပျောက်ကွယ်သွားမှာလား။
Merlin အဆိုပါ Debianite ဟုသူကပြောသည်
xde နဲ့ mate (gnome2) ကိုပိုကြိုက်သည်။
အမှန်တရားက kubuntu ဘယ်တုန်းကမှတကယ်မထင်ခဲ့သည့်အတွက် Klinux, KDEbian, Kebian ကဲ့သို့သောအမည်များကိုပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းလိုက်တယ်ညာဘက်တံပိုးမှုတ်သောအခါ?
၎င်းသည်အပြာရောင်စနစ်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သူတို့က System ကို GNU / Linux (SKGL) နှင့် KDE နှင့်ထည့်နိုင်သည်။ kubuntu SuKuGuLu မှလည်းကြားဖြတ်နိုင်သည်။
hahahahaha Sukugulu ကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်ပါ ၎င်းတို့သည်အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းမပြောင်းသင့်ပါ။
စိတ်မကောင်းပါဘူး, ထိုနာမကိုအမှီမျိုးရယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဆူကူလူ XD
Merlin အဆိုပါ Debianite မှပြန်ပြောသည်
ဟုတ်ကဲ့ဒါကငါ့ရဲ့ Kebian AJAJAJAJAJA လို xD
သူတို့နှစ် ဦး စလုံး sound အသံကြီး
မူရင်းကုမ္ပဏီ ubuntu မှာပြproblemsနာတက်လိမ့်မယ် .. Ubuntu နာမည်က GPL လို့မထင်ဘူး
ဆောင်းပါးတွင် kubuntu သည် canonical ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။
အတိအကျ .. ထို့ကြောင့်အလုံခြုံဆုံးအရာနာမကိုအမှီပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်
Guillermo Abrego ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ စီမံကိန်း၏ကောင်းကျိုးအတွက်အမည်ပြောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာမရှိပါကကျွန်ုပ်သည် Kubuntu ထက် ပို၍ ပင်မေ့သွားသောအမှန်တရားမှာအလားအလာများစွာရှိသော Xubuntu နှင့်အတူထပ်တူဖြစ်ပျက်လိုသည်။
Guillermo Abrego အားပြန်ပြောပါ
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ၁၂.၀၄ ပြီးနောက်၊ canonical သည် kubuntu ကိုထောက်ပံ့တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။http://www.desarrolloweb.com/actualidad/canonical-adios-kubuntu-6506.htmlkubuntu ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ "အသိုင်းအဝိုင်း" သည်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုနောက်ပိုင်းတွင်ကြေငြာခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်ရှိနေခဲ့သည်။ (http://www.meneame.net/story/kubuntu-pierde-estatus-distribucion-oficial), ယခုတွင် kubuntu အားဒေါ်လာထောက်ပံ့မှုပေးသောတစ်စုံတစ် ဦး ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် canonical သည် kubuntu အတွက်အနာဂတ်ကိုမမြင်ဟုဆိုသည်
မကြာသေးမီက Lubuntu 11.10 ကို Canonical နှင့်ပေါင်းထည့်လိုက်ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် Kubuntu ကိုသုံးခဲ့သည်။ သို့သော် KDE ၏မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကြောင့် ၁၁.၀၄ ကတည်းက Lubuntu ကိုငါရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Canonical သည် Kubuntu ကိုဖျက်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်၊
ကောင်းပြီ၊ မင်းသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးလို့ထင်ရတယ်။ ဤဆောင်းပါးနှင့်အတူသင်အရေးမကြီးသောအရာများအတွက် Canonical သို့လောင်စာများဆက်လက်ထည့်သွင်းချင်ရုံသာပုံရသည်။ "စပွန်ဆာ" ၏ဘာသာပြန်ဆိုမှုသည် "စပွန်ဆာ" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်ဟုသင်ထင်သလား၊ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါး၏ဆိုလိုရင်းကားအဘယ်နည်း။
၎င်းသည်လောင်စာဆီဖြည့်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်စပွန်ဆာအသစ်၏သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ (…ဘာသာပြန်ချက်သည်အလွန်ကောင်းသည်ကိုသေချာသိပါသည်) လုံးဝအပြုသဘောဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Canonical သည်တကယ်တမ်း Kubuntu developer တစ် ဦး တည်းကိုသာပေးချေခဲ့ပြီး ၂၅ ခုအနက် ၂ ခုမှာဒါကအများကြီးမပံ့ပိုးခဲ့ပါဘူး။ သီအိုရီအရ Blue Systems သည် ထပ်မံ၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးထို developer ကို (အချိန်ပြည့်) ပေးရမည် (dev သည် Kubuntu ကိုဖန်တီးသူဖြစ်သည်) သို့သော်အခြားသူများကိုမူမပေးချေ။ ကောင်းတာကအခြေခံအဆောက်အ ဦ တွေစသဖြင့်ငွေပေးရလိမ့်မယ်။
အပြောင်းအလဲကအရမ်းကြီးလွန်းတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Kubuntu ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ကနေအသက်ဆက်ရှင်သန်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိရတာဝမ်းသာပါတယ်၊ ကျနော့်အမြင်ကတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်။
အပြာရောင်စနစ်များကိုဘာမျှနှင့်သုညအကြားသိသည်။ ကျွန်ုပ်သိသည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ၎င်းတို့သည်မျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်သော ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ xD သည်အရေးကြီးသည်မှာသူတို့သည်ငွေကိုထည့်သွင်းပြီး Kubuntu ထံမှပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်များစွာကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည် ရပ်ရွာ, ထိုစိတ်ကူးပါလိမ့်မယ်။
နောက် Kubuntu ၏ဗားရှင်းကများစွာကတိပြုသည်။ ဤ distro နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မနှစ်သက်သည့်အချက်တစ်ခုမှာ Muon (သူ၌အမှားအယွင်းများစွာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်) ကံကောင်းချင်တော့မူကွဲအသစ်များသည် ပို၍ တည်ငြိမ်သော်လည်း၊ ။ -
ငါနှစ်အနည်းငယ်ကြာ Kubuntu အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ Gnome ကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ သို့သော် Canonical ၏အစွမ်းသည်နောက်ဆုံး၌ငါ့ကိုကျွေးမွေးခဲ့ပြီး Debian ကို KDE ဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
Brother ကဒီကိစ္စကိုခွင့်လွတ်ပါ။ Debian Sid ကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်ကျန်းမာပါသလား။
အဘယ်သူသည်ပိုမြန် ubuntu သို့မဟုတ် debian sid ကို update?
သင် debian sid ထည့်သွင်းရန် ubuntu အသုံးပြုသူကိုအကြံပေးလိုပါသလား။
Ubuntu သည်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် Debian ၏မတည်ငြိမ်သောအခက်အခဲသည် Rolling release ဖြစ်သည်။
Ubuntu သည်ဖြန့်ချိမှုပုံစံအသစ်ထွက်ပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်ဘာမှ (သို့မဟုတ်နီးပါး) မည်သည့်အရာကိုမျှမွမ်းမံပေးသည်။
ဘုံအသုံးပြုရန် / အသုံးပြုရန်အတွက်အကြံပေးသည် Debian Testing ဖြစ်သည်။
Kubuntu သည် KDE package များကိုမကြာခဏမွမ်းမံသည်။ Kubuntu 12.04 နှင့်မွမ်းမံထားသော Kubuntu 11.10 အကြားကွာခြားချက်များစွာမရှိပါ။
ကြည့်ရှုပါ၊ အခြေခံအားဖြင့်ကွဲလွဲချက်များမှာ package များကြောင့်ဖြစ်သည်
"Debian Stable" တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းများမရှိသော်လည်း "Testing" repositories ကိုထည့်ပြီး "Mix" ကိုလုပ်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်အရေးကြီးသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကို ရွေးချယ်၍ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိုလျှင် "Debian Testing" ကိုနှိပ်ပါ။
"Sid" (သို့) "မတည်ငြိမ်မှု" အကြောင်းကျွန်တော်မထောက်ခံဘူး၊ တည်ငြိမ်မှုမကောင်းဘူး။ ၎င်းသည် Desktop အတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။
ခြံစည်းရိုး !!! ဘာလဲ ... စိတ်မကောင်းပါဘူးငါသတိမပြုမိ
ငါ့နာမကိုပြောင်းသင့်တယ်လို့မထင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက Ubuntu ဖြစ်နေ ဦး မယ်။ ဥပမာ Canaima လို debian ဖြစ်ရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားနာမည်ရှိရင်မင်းမထင်ဘူးလား။
Blue Systems သည် Kubuntu အသိုင်းအဝိုင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာသူတို့စကားလုံးရှိသလားဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ Riddell ကကြေငြာဖို့မရှက်ပါဘူး။
kubuntu အသစ်တစ်ခုအတွက်ကူပွန်အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အနာဂတ်မှာ kubuntu မှာသူတို့အတွက် configuration plugins တွေထည့်ပြီး mandriva drakes တွေထည့်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါက ၂၀၁၂ Aprilပြီ ၂၆ ကနေ kubuntu ကိုဒေါင်းလုဒ်ချဖို့ပဲ။ က kde နှင့်အတူ canaima တစ်ဗားရှင်းလုပ်ဝံ့သူတစ် ဦး ကမေးတယ်
သိပ္ပံ ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၀ န်ထမ်းများကိုကာနမ်ရှိ kde ကိုမေးမြန်းပြီးကနင်ဟုခေါ်သည်ကောင်းသည်။
Phinx Desktop - Xfce သုံးစွဲသူများအတွက် distro
HTML5- အင်တာနက်ကိုပြောင်းလဲစေမည့်နည်းပညာ